Ciidamada Eritrea oo billaabay inay ka baxaan Tigray – Ethiopia | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Ciidamada Eritrea oo billaabay inay ka baxaan Tigray – Ethiopia
Ciidamada Eritrea oo billaabay inay ka baxaan Tigray – Ethiopia
Dowladda Ethiopia ayaa Sabtidii sheegtay in ciidamada Eritrea ay ka dagaalamaya gobolka Tigray “ay billaabeen inay halkaas ka baxaan,” maalin kadib markii dalalka ururka G7 ay ku baaqeen ka bixitaan deg deg ah.
Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii tagay sheegay in ciidamada Eritrea ay ka bixi doonaan gobolka Tigray, saddex maalin un kadib markii uu qiray joogitaankooda.
Hase yeeshee dadka degan qaar ka mid ah magaalooyinka gobolka Tigray ayaa soo werinayey joogitaanka askarta Eritrea, waxaana bayaan Jimcihii kasoo baxay G7 lagu yiri in bixitaankooda “ay qasab tahay inuu noqdo mid deg deg ah, shuduud la’aan ah, oo la xaqiijin karo.”
Ayada oo ka jawaabeysa ayaa wasaaradda arrimaha dibedda qoraal ay Sabtdii soo dhigtay baraha bulshada waxay ku sheegay in hanaanka ay ku baxayaan ciidankaas uu billowday.
“Sida la shaaciyey toddobaadkii tegay, ciidamada Eritrea ee kasoo gudbay xuduudda kadib markii ay daan-daansadeen TPLF ayaa hadda billaabay in faarujiyaan,” ayaa lagu yiri bayaanka, oo intaa sku daray in cidiamada Ethiopia ay “hadda la wareegeen ilaalinta xuduudda qaranka.
Abiy ayaa bishii November guluf dagaal ku qaaday gobolka Tigray kadib markii uu sheegay in ciidamada ururka TPLF ee maamulayey gobolka Tigray ay weerareen fariisimada ciidamada dowladda federaalka.
Labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea ayaa muddo bilo ah beeninayay inay ciidamo Eritrean ah galeen gobolka Tigray, taasi oo ay xaqiijiyeen dublumaasiyiin, shaqaalaha gargaarka, dadka deegaanka iyo qaar ka mid saraakiisha militariga Ethiopia.
Dagaalka gobolka Tigray ayaa waxaa ku geeriyoodeen kumanaan qof, iyadoo kumanaan kale ay ku barakeceen. Boqolaal kun oo kale ayaa lagu qasbay in ay u qaxaan dalka deriska ah ee Sudan.
Hay’adaha xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale soo weriyey tacaddiyo ay ka mid yihiin kufsi, jirdil iyo dalal ka dhacay gobolka.
Gobolkan oo ay ku nool yihiin dad ka badan 5 milyan oo qof ayaa waxaa uu wajahayaa gabaabsi dhanka cunnada, biyaha iyo daawada, sida ay sheegtay QM.
Ciidamada Eritrea oo billaabay inay ka baxaan Tigray – Ethiopia was last modified: April 5th, 2021 by Admin
Roobab Mahiigaanno lagu le’day oo Indonesia ka da’ay
Dhageyso+Sawiro:-Dood ku saabasan Caadalada
Ku simaha Madaxweynaha Koofur Galbeed oo la kulmay Wasiirka Haweenka X.F ee Soomaaliya (sawirro)
Guddiga DFS u matelaya Dacwada Badda oo u ambabaxay Magaalada Hague